vendredi, 29 avril 2022 16:37
Rasoanaivo Rado : Voatendry ho Tale teknika nasionaly ny FMF
Rasoanaivo Rado : Voatendry ho Tale teknika nasionaly ny FMF.
Nicolas Dupuis : Naverina ho mpanazatran'ny Barea
Mpanazatra nitondra ny Barea Madagasikara tany amin’ny CAN 2019 tany Ejipta i Nicolas Dupuis. Nakisaky ny Federasiona malagasy ny baolina kitra teo amin'io toerana io izy ny aprily 2021, ka i Éric Rabesandratana no notendrena nandimby toerana azy. Tsy tafita niatrika ny CAN 2021 tany Cameroun ny Barea. Naverina amin’ny toeran'ny mpanazatra i Nicolas Dupuis.Hiatrika lalao voalohany amin’ny fifanintsanam-bondrona ny Barea afaka iray volana, handrato lalao any Ghana iray vondrona E amintsika.
Ho faranana amin’ny alalan’ny fametrahana ny "piste d’athlétisme en tartan" ireo asa manodidina ny kianja filalaovana ao anatin’ny tetikasa fanavaozana sy fampanarahana fenitra ny kianja BAREA Mahamasina. Asa efa nifanarahana tamin’ny orinasa mpanatanteraka izany, saingy tsy maintsy niandrasana ny fahataperan’ny fotoanan’ny orana sy ny fotoana nilaina ho fanamboarana sy fanafarana ny fitaovana. Tonga niaraka tamin’izay ihany koa ireo teknisiana manokana hametraka izany. Nankatoavina nandritry ny filan-kevitry ny Minisitra ny 27 aprily teo ny fandraisan’ny Fanjakana Malagasy an-tànana ny haban-tseranana mifanaraka amin’ireo entana ireo, toy izay efa nampiharina rehetra teo aloha mahakasika izany tetikasa izany.
vendredi, 15 avril 2022 20:16
Lalaon’ny Nosy 2023 : Ao amin'ny Kianja Barea ny lanonam-panokafana sy famaranana
Tonga nitsidika ny toerana hametrahana ny biraon’ny Komity mpikarakara ny Lalaon’ny Nosy (COJI), tetsy amin’ny kianjan’ny Barea Mahamasina, androany zoma faha-15 aprily ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena TINOKA Roberto, niaraka tamin’ny filohan’ny Komity Olimpika Malagasy Siteny RANDRIANASOLONIAIKO. Ao amin’ny Kianja Barea no hanatanterahana ny lanonam-panokafana sy famaranana ny Lalaon’ny Nosy 2023. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 08 avril 2022 18:45
TINOKA Roberto : Miandrandra vokatra tsara amin'ny taranja "Kick boxing" amin'ny lalaon'ny Nosy 2023
Tonga nitsidika ara-pomba fifanajana an'Andriamatoa TINOKA Roberto, Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, tao amin'ny toeram-piasany ao Ambohijatovo ny fianakaviam-ben'ny mpikatroka ny taranja "Kick boxing" izay notarihan'ny Jeneraly LYLISON René de Rolland, Filoha mitantana ny federasiona. Niarahaba ny Minisitra izy ireo amin'izao fitantanany indray ny Minisitera izao, sy hametraka ny fatokisana ny hananana hoavy tsara amin'ity taranja ity eto Madagasikara, ary hamerina indray ny lazan'ny Kick boxing, izay nahazoantsika tompondaka manerantany. “Vonona hanohana hatrany ny mpanao fanatanjahantena rehetra ny Ministera”, hoy ny Minisitra TINOKA Roberto, ary miandrandra vokatra tsara isika amin'ny lalaon'ny Nosy, izay ho tanterahina eto amintsika ny taona 2023. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 30 mars 2022 20:15
Mondial Qatar 2022 : Fantatra ireo ekipa 5 hisolotena an'i Afrika
Tontosa ny talata alina ireo lalao miverina namoahana ireo ekipam-pirenena miisa dimy solontenan'i Afrika amin’ny fiadiana ny tompondaka manerantany amin’ny baolina kitra hatao any Qatar amin’ity taona 2022 ity. Tafavoaka tamin'izany i Sénégal, Maroc, Tunisie, Cameroun ary Ghana.Mpanazatra teratany avokoa ny mpanazatran'ireo ekipa hanao Mondial ireo ankoatra ny ekipam-pirenen'i Maroc ihany no teratany vahiny. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 20 mars 2022 10:03
Sahavola - Fenoarivo Atsinanana : Notokanana ny kianja manarapenitra
Notokanana ny sabotsy 19 Martsa 2022 ny kianja manarapenitra vaovao teto Fenoarivo Atsinanana, Faritra Analanjirofo. Tonga nitokana izany ny Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, izay notronin'ny Praiministra Lehiben'ny Governemanta, ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Tinoka Roberto sy ireo mpikambana sasany eo anivon'ny Governemanta, ary ireo olo-manankaja ambony ao amin'ny faritra Analanjirofo. Nasongadin'ny minisitra Tinoka Roberto ny maha zava-dehibe ny fananana foto-drafitrasa ara-panatanjahantena raitra, indrindra amin'izao vanim-potoana fanomanana ny Lalaon'ny Nosy, izay hatao eto Madagasikara ny volana Aogositra 2023 izao.
lundi, 07 mars 2022 18:02
Federasiona Malagasy Kick Boxing : Voafidy ho filoha ny Jeneraly LYLISON René de Roland
Tanteraka ny alahady faha 6 Martsa 2022, tao amin’ny Akademia Nasionalin’ny Fanatanjahantena (ANS) Ampefiloha, ny fifidianana izay ho filohan’ny Federasiona Malagasy ny taranja Kick Boxing. Voafidy hitantana izany, ny Jeneraly LYLISON René de Roland, raha nazaho vato 5 avy amin'ireo ligy 9 tonga nifidy. Efatra ny kandida nifaninana dia ny Jeneraly Lilison Rene de Roland, Boto Gilbert, Fernand Guy ary i Vital Serge. Goverinoran'ny Faritra Sofia ny Jeneraly LYLISON René de Roland. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 02 février 2022 17:34
CAN 2021 : Lalao manasa-dalana
Ho tontosaina anio amin'ny 10ora alina, ora eto Madagasikara, ny lalao manasa-dalana ho an'ny CAN 2021. Hifanandrina amin'izany i Burkina Faso sy Sénégal. Atao rahampitso alakamisy 3 febroary kosa, amin'ny 10ora alina, ora eto Madagasikara, ny fifanitsanana manasa-dalana eo amin'i Cameroun tompon-tanàna, sy Egypte.
Lehilahy mpitam-bola efa misotro ronono, Gyasehene Dawuriso, 76 taona, no nampiasa ny volan'ny fikambanan'ny mpamboly Cacao tany Asante Akyem, avaratry Ghana, nentiny niloka tamin'ny lalao CAN any Cameroun, ka nahavery vola azy 11 124 797 Franc CFA (77 000 000ar). Tsy nanana vahaolana anefa ny lehilahy, ka dia nisafidy ny lalan'ny famonoana tena, ka nirahiny ny zanany lahy hamana rano, dia nararaotiny nandritra ny tsy naha teo ny zanany no nanantonany ny tendany tao amin'ny efitra nipetrahan'izy ireo.